B.P. PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD.
ဖိုငျဘာကလတျရတေံလြှောကျ / ရတေံလြှောကျ
ဘီ ဖီ ဖိုငျဘာကလတျရတေံလြှောကျက အန်တရာယျကငျးသောအဆငျ့မွငျ့ပစ်စညျးအသုံးပွုသညျ။ ထုတျကုနျခုခံ၊ သံခြေးမပါ၊ ကွာကွာရှညျရှညျသုံးစှဲစရေနျ အပူနှငျ့အရမျးလှနျရောငျခွညျတို့ကို ကောငျးမှနျစှာကှယျပေးသညျ။ လှပစရေနျ အိမျ၊ အဆောကျအအုံ၊ စကျရုံ၊ (သို့) ဖိုငျဘာကလတျတပျစငျသညျ့ ဖောကျသညျအုပျစုတိုငျးတို့၏လိုအပျခကျြအလိုကျ ကုနျထုတျလုပျပါသညျ။ ဘီ ဖီ ကုမ်ပဏီမှ ဖောကျသညျအဆောကျအအုံသို့ ဖိုငျဘာကလတျရတေံလြှောကျဒီဇိုငျးပေးရနျ အဆောကျအအုံ၏ဗိသုကာအတတျပညာနှငျ့အတူ တပျစငျနိုငျသညျ။
ဘီ ဖီ ကုန်ထုတ်လုပ်နှင့် ရောင်းချခြင်း ကုမ္ပဏီ လီမီတက်
ဘီ ဖီ ကုန်ထုတ်လုပ်နှင့်ရောင်းချခြင်း ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် ဖိုက်ဘာမှန်၊ အလင်းရောင်ခေါင်မိုး၊ လေတိုက်ကိရိယာနှင့်အတူ အရင်းခံရာစသည်တို့ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူကို ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံ35 နှစ်ကျော်နှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဈေဒနှုန်းရသင့်သောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရသောထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်သူကိုဖြစ်သည်။ စိုပြေသောအမိုးအမျိုးအစားအားလုံးကို ထုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ခေတ်သစ်စက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ မဆင့်မြင့်နည်းပညာများတိုးတက်လာခြင်း ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 နှင့် JIS A 5701 – 1995 နှင့်အညီ သိပ္ပံဝန်ဆောင်မှုဌာနမှ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များထံမပေးပို့မီ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်မှ လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးစေ့စပ်သေချာသည်။ သဘာဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန် စစ်ဆေးမှုများအတွက် ရှည်လျားသောသက်တမ်းရှိသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြည်တွင်း နှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တို့ကို ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း ဆက်လက်၍ စားသုံးသူများ၏အကျိုးအတွက် သုတေသနနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။
ဖိုက်ဘာမှန်ခေါင်မိုးအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ကို ကုမ္ပဏီမှ ပေးအပ်ရန် ကျေနပ်အားရမှုရှိသည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများအတွက် အနုပညာ၊ အလှဆင်အလုပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လေဝင်လေထွက်လုပ်ငန်းနှင့် ISO 9001: 2015 (Certificate No.4799) စနစ်အရ အတွေ့အကြုံရှိသည့်အဖွဲ့တို့ဖြင့် အတွင်းနှင့်အပြင်သည့်နေရာတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေးမည်ဖြစ်သည်။
B.P. PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD. (M)